Ho fanarenana ny toekarena malagasy : nanome lesona efatra ny Banky iraisam-pirenena | NewsMada
Ho fanarenana ny toekarena malagasy : nanome lesona efatra ny Banky iraisam-pirenena
Nampahafantatra antontan-kevitra ho fanatsarana ny toekarena eto Madagasikara ny Banky iraisam-pirenena, omaly. Fehin-kevitra efatrano navoaka tamin’izany hampiakatra haingana sy hahamarin-toerana ny toekarena malagasy.
Nandrafitra fehin-kevitra efatra karazana lesona ho fampandrosoana ny toekarena malagasy ny Banky iraisam-pirenena. « Nandritra ny enin-taona eo ho eo, nijanona tamin’ny salanisa 5 % ny tahan’ny harinkarena eto Madagasikara, anisan’ny ambany indrindra aty Afrika, manaporofo ihany koa ny fahantran’ny mponina », hoy ny solontenan’ny Banky iraisam-pirenena, i Marie Chantal Uwanyiligira. Azo atao tsara anefa ny mampiakatra ny toekarena, indrindra fa manana ny rehetra hahatongavana amin’izany eto Madagasikara.
Araka ny fanadihadiana nataon’ny Banky iraisam-pirenena, sehatra efatra azo hanovana haingana hampiakarana ny tahan’ny fampandrosoana : fotodrafitrasa ho an’ny fifandraisana sy ny angovo ; fampivoarana ny fambolena ; fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana ; ary fanomezan-danja ny maha olona. Narafitra ao anatin’ny antontan-kevitra nataon’ny Banky iraisam-pirenena ireo ho fantatry ny mpitondra malagasy handraisana fanapahan-kevitra, araka ny maha laharam-pahamehana azy.
Momba ny fotodrafitrasa, nasongadin’ny Banky iraisam-pirenena ny faharatsian’ny lalana manerana ny Nosy, indrindra mampifandray ireo kaominina any ambanivohitra. Lalana ratsy sakana ho an’ny fampandrosoana ; fahazoana herinaratra ambany sy lafo indrindra aty Afrika ny eto Madagasikara. Ny fambolena, raha tany amin’ny taona 1972, mpanondrana vary i Madagasikara, ankehitriny lasa mpanafatra. « Azo avadika tsara izany, vitan’ny firenen-kafa manana mponina anjatony tapitrisa, nahoana no tsy ho vitan’i Madagasikara, misy mponina 25 tapitrisa ? », hoy ny solontenan’ny Banky iraisam-pirenena.
47 % tratra aoriana amin’ny fitomboana
Anisan’ny laharam-pahamehana koa ny fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana, ny fanarahan-dalàna, ny fifaninanana madio. Ary indrindra ny fanomezan-danja ny maha olona. Ankoatra ny fitombon’ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra, 47 % ny zaza tratra aoriana amin’ny fitomboana noho ny tsy fahampian-tsakafo. Izany tsy fahampian-tsakafo izany, tsy afahana mianatra sy mamokatra. Vahaolana naroson’ny Banky iraisam-pirenena ny fitandroana ny fahasalamam-bahoaka sy fanatsarana ny fampianarana. Tsy ahitana mangirana ireo sehatra roa ireo ho an’izay tsy manam-bola. Tsy hita ny tamberin’andraikitra avy amin’ny fanjakana ho tombontsoam-bahoaka amin’ny fahasalamana sy ny fampianarana.